Better World EdMuuqaalo & Sheekooyin Aan Hadal Lahayn Waxbarasho Bini'aadaniya
Waa maxay sababta Fiidiyowyada aan hadalka lahayn
Markhaatiyaal Dhab ah
Saxaafadda & Astaamaha Warbaahinta
Daawo Sheekooyinka Caalamka
Ku deeq Lacag & Saamiyo
Hadiyad A Xubinnimo
Sii Kaarka Hadiyada
Hel Gear raaxo leh
Dadnimada, lahaanshaha, ka mid noqoshada & sinnaanta
Hogaaminta, Bulshada & Madaniga
Dunida, Deegaanka & Cimilada
Caafimaadka, Fayo-qabka & Nafaqada
Waxbarashada & Iskuulka
Miyir -qabka, Ruuxnimada & Diinta
Barid, Barasho & Aqoon la'aan
Cabirka & Xogta
Isku dhufashada & Qaybsanaanta
Isugeyn & Kala-goyn
Cabbiraad & Joometri
Isugeyn & kalagoyn 100
Mawduucyada Akhriska iyo Qoraalka
Fahamka, Isgaarsiinta & Wadashaqaynta
Isugeynta 1s iyo 10s
Horudhac kudhisan lambarro 2-god ah
Dhibaatooyinka ereyga oo aad iyo aad u yar
Mahadsanid Aragtiyo kala Duwan & Dariiqooyinka Nolosha
Aragtida Qaadashada & Ogaanshaha Caalamka
Naxariista, Fahamka & Dhegeysiga
Ixtiraamka Dadka Kale & Hormarinta Astaamaha
Bani'aadamka Waxbarasho La Better World Ed
Bar xisaabta nolosha dhabta ah, akhris-qoraalka, dareenka, wacyiga caalamiga ah, xiisaha, iyo lahaanshaha. Dhammaan ilaa 150+ sheekooyinka adduunka ka wanaagsan.
NOLOSHA DHABTA AH KEE BARASHADA
Waxaan nahay hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo ku jirta hadafka bani'aadamnimada waxbarashada.
Waxaan u abuurnaa sheekooyin nololeed oo dhab ah adduun wanaagsan.
Cajiib dhiirigelin leh.
La jaanqaadaya aqoonyahannada.
Fiidiyowyo aan ereyo lahayn
Bar xiisaha ka baxsan xukunka. Yaab erayo ka baxsan. La qabsiga caalamka. Caalamka oo dhan loo wada dhan yahay.
Xisaabta iyo akhris-qoraalka ka dhig mid khuseeya. Sheekooyinka bani'aadamnimada waxay kobciyaan dareenka iyo aqoonta.
Kobcinta isku xidhka iyo lahaanshaha. Ujeedada iyo macnaha. Hal-abuurka iyo iskaashiga.
Better World Ed Wuxuu caawiyaa dhalinyarada
Jeclahay in aan wax ka bartoselwaad aragtaa,
midba midka kale, iyo adduunkeena.
Codso xisaabta iyo akhris-qoraalka
nolosha dhabta ah, hab ku habboon.
Koriyo dareenka iyo naxariista
in la kala qaybiyo oo la dhiso lahaanshaha.
In waxbarashada laga dhigo dad badan.
Dugsiga, dugsi-guri, iyo nolosha.
Gal 20 Sheeko Qoraal ah iyo 20 Qorsheyaal Cashar ah oo ku lammaan dhawr Fiidiyow Ereyo La'aan ah oo caalami ah!
Sheekooyinka calaamadeynta & sameyso liiskaaga gaarka ah!
(bishiiba, sanadkiiba la dallaco)
$42.00 xubinkiiba / sanadkii
isticmaalayaal badan, qiimo jaban
Dugsiga / Baraha / Magaca Waalidka
DIB U EEGID IYO EEG
Soo gal 50 Sheekooyin Qoraal ah oo si taxaddar leh loo xushay iyo Qorshooyinka Casharka 50 ee ku lammaan qaar badan oo ka mid ah fiidiyowyadeenna aan caadiga ahayn ee Caalamiga ah!
$72.00 xubinkiiba / sanadkii
Gal DHAMMAAN 50+ Fiidyow aan Erey lahayn, 150+ Sheekooyin Qoran ah, iyo 150+ Qorsheyaal Cashar ah oo ka socda 14 waddan!
Soo gal DHAMMAAN safarada waxbarasho ee soosocda iyo mustaqbalka!
Soo gal qorshooyinka casharka gaarka ah ee loogu talagalay in lagu waafajiyo DHAMMAAN sheekooyinkeena!
Kala duwanaanta & qotada dheer waxyaabaha kaladuwan!
Raadinta ugu wanaagsan & dhiraandhirin khibrad!
Buuxi sheekooyinka oo samee liisaska heesaha gaarka ah!
Taageero Bixin ah
$100.00 xubinkiiba / sanadkii
La kulan muraayad cusub si aad u aragto xisaabta,
akhris-qoris, midba midka kale, iyo adduunkeena.
Muraayad cusub si loo arko dadnimadeena la wadaago.
Ku Dhiiri La Yaabka Ka Baxa Erayada Better World Ed
Isticmaal code WANAAGSAN Markaad jeeg ka bixiso 40% dhimis nolosha - adiga ama sida ugu fiican hadiyad!
Fiidiyowyada luqadda loo dhan yahay. Ku dhiiri geli yaabab erayo ka baxsan. La qabsiga caalamiga ah.
Aqoonta Caalamiga ah
Sheekooyin dhab ah oo ku saabsan dadka adduunka oo dhan. Dhaqan ahaan loo wada dhan yahay.
Xisaab macno leh
Ka jawaab "Sidee ayay arrintan uga jirtaa adduunka?" Aqoonyahano sax ah.
Ka Shaqeynta Eexda
Ka hortag eexda oo ka hor imaada fikradaha wada.
Barashada Nolosha Dhabta Ah
Isku duwo xisaabta, akhris-qoraalka, dareenka, iyo wacyiga caalamiga ah si wadajir ah.
Sheekooyinka la isku xidho way kala qaybsantaa iyadoo la dhisayo dareenka iyo isku xidhka.
U sahamin mowduucyada muhiimka ah ee caalamiga ah ee aadanaha, lala xiriiri karo, hab ku habboon.
Hook ardyada oo si qotodheer uga fikir sheekooyinka nolosha dhabta ah ee aadanaha.
“Quruxda Better World Ed waa in fiidiyowyada iyo sheekooyinka aan erayada lahayn ay si buuxda ugu dhex milmi karaan manhajkeena jira. Ma aha "wax" dheeraad ah oo la baro. Better World Ed waa sida aan u dhisno awoodda dhammaan ardaydeenna si ay ula falgalaan oo saameyn ugu yeeshaan adduunka iyada oo loo marayo manhajka jira."
DAAWO SHEEKOOYIN DHEERAAD AH
BARO, BAAR, oo shaandhayso MUUQAALADA IYO SHEEKOOYINKA AADANAHA EE AAN EREYADA AHAYN
Muuqaalo aan hadal lahayn iyo sheekooyinka aadanaha si loo helo adduun wanaagsan.
La qabsiga caalamiga ah, dhaqan ahaan khuseeya, iyo luqad loo dhan yahay.
Ku naqshadee safarkaaga waxbarasho ee aduunka ka wanaagsan oo leh liis-ciyaareed gaar ah.
BARO 150+ sheeko oo bini'aadantinimo
ISKU DAY LABA SHEEKO OO BILAASH AH!
Demos Casharka Adduunka Wanaagsan
Podcast ka muuqda
MUUQAALYO BADAN IYO MEESHA
Waxaan nahay wax-bartayaal nolosha oo dhan ah, barayaal & sheeko-yaqaanno adduunka ka wanaagsan oo abuuraya nuxur bani-aadminimo oo aan rabno inaan helno carruur ahaan.
Waa maxay sababta? iyada oo aan xiisaha xukunka, Awoodeena in aan midba midka kale u aragno mid gaar ah, dhan, qurux bini aadamku wuxuu bilaabaa isku qasnaan.
Tani waxay keenaysaa guntinno gudaha iyo dhexdeena ah.
guntiyo inoo horseeda in aynu ula dhaqano dadka kale iyo meereheena si aan naxariis iyo naxariis toona ahayn.
Better World EdSheekooyinka nolosha dhabta ah ee bini'aadamku waxay naga caawiyaan inaan furfurno guntinnadan oo aan dib u habeynno bulshada.
SIDEE BETTER WORLD ED shuqullada
Sheeko kasta oo adduunka ka wanaagsan waxay tiddedaa xisaabta, akhris-qoraalka, dareenka, yaababka, wacyiga caalamiga ah, iyo isfahamka dhaqanka si wadajir ah.
MUUQAALO MUUQAAL AH ku saabsan aadanaha gaarka ah adduunka oo dhan. Bar oo bar xiisaha xukunka da 'kasta.
Waligiis yaab. Qoto dheer leh.
SHEEKOOYINKA AADANAHA & SU'AALAHA ka asxaabteena cusub ee fiidiyowyo aan erey lahayn. Weave dareenka, xisaabta, akhris-qoraalka & lahaanshaha.
Faham macno leh. Sheekooyinka adduunka ka wanaagsan.
QORSHEYAYAASHA CASHAR ADDUUNKA WANAAGSAN waxaan ku xijineynaa fiidiyowyada & sheekooyinka aqoonyahannada ku habboon. Hawlaha, farshaxanka, dhaqdhaqaaqa, ciyaarta & inbadan.
Sheekada naxariista. Wadashaqeyn hal abuur leh.
Sheekooyinka adduunka ka wanagsan si ay nooga caawiyaan kobcinta wacyiga, xiisaha, dareenka, iyo naxariista.
Hal-abuurka, fikirka muhiimka ah, iskaashiga, iyo isku xidhka.
Nolosha. Carruurnimada Hore, K-12 & Dadka waaweyn.
SHEEKOOYINKA ADUUNKA OO KA WANAAGSAN BARASHADA NOLOSHA
In la raadiyo aragtiyo kala duwan. Fikradaha tartanka. Iska horkeen eexda. Hakinta xukunka. Dabaal su'aalaha.
Inuu shucuurtayada wada qabsado.
Si aad ugu raaxeysato kakanaantayada, kala duwanaanshaha quruxda badan.
In la is arko. Inay is fahmaan.
Si aad aadamiga u soo geliso fasalka. Geli dugsi-gurigeena.
Si loo keeno bini'aadantinimada waxbarashada.
dhexgalka caalamiga ah iyo gudaha in la jeclaado in wax laga barto self, kuwa kale, iyo adduunkeena.
Ku baro jacaylka self, kuwa kale, iyo adduunkeena. Si loo helo adduun wanaagsan.
BARASHADA AADANAHA EE SIDA ADUUNKA UGU FIICAN
Better world education for our aadanaha la wadaago.
Waayo, qalbigeenna, maankeenna, jidhkeenna, iyo nafteenna.
Daaweynta, midnimada, iyo la noolaanshaha ubuntu.
Ujeeddo. Micnaha. Sharafnimo. Lahaanshaha
BETTER WORLD ED MUUQAALYO CUSBOONAYSIINTA AADANAHA
Sheekooyinka caalamiga ah si ay u noqdaan bini'aadam maanka ku haya oo furfuraya guntinnada gudaha iyo dhexdeenna ah. Si dib-u-habayn loogu sameeyo haykalka bulshada.
Sheekooyinka adduunka ka wanaagsan oo dib loogu soo celinayo bini'aadminimada waxbarashada.
Si aan ANAGA U NAHAY.
HEL SHEEKOOYINKA ADUUNKA UGU FIICAN
DAAWO CULIMADA IYO ARDAYDA MUUQAALADA IYO SHEEKOOYINKA AADAN EREYADA AH KA MARKAAN DUNIDA UGU FIICAN
Aan keeno aadanaha waxbarashada si ay u adduun wanaagsan.
Aynu ku dhex milmayno dareenka fasalka iyo waxbarashada guriga.
Aan aragno dadnimo wadaaga.
Si loo helo adduun wanaagsan, waa inaan.
In badan oo naga mid ah ayaa ku soo kornay bilaa taageero si aan ugu shaqeyno fahamka.
Fahamka dadka kala duwan, dhaqamada, dareenka, maskaxda, aragtiyada & qaababka nolosha.
Fahamka dadnimadeenna la wadaago.
Taageero la'aan si ay ugu dhaqmaan xiisaha ka hor iyo ka dib xukunka.
Taageero la'aan si qoto dheer u dareemo.
Taabadalkeed, waxaa naloo sheegay inaan aad u xasaasi nahay.
In badan oo naga mid ah ayaa ku soo kornay taageero la'aan inay jeclaadaan barashada nolosha.
Inaad barato jacaylka nolosha.
Si loo dhiso adduun wanaagsan.
Hanuunin kugu filan.
Cadaadis badan oo ku saabsan "ogaanshaha".
Jacayl kuma filna su'aalaha.
Dhageysi kuma filna.
Inbadan “ha muujin shucuur”.
Kuma filna isku soo dhaweynta dareenka.
Aad u badan "noqo xoog".
Ma bogsiin ku filan.
Aad u badan “wax walba ma beddeli kartid”.
Kuma filna “WAAN bedeli karnaa wax walba”.
Aad u badan adduunka dhabta ah.
Kuma filna adduun ka wanaagsan.
Maskax badnaan badan.
Qalbi-dhagax kugu filan.
Waxaan u baahanahay waxbarasho qalbiyadeena. Si loo helo adduun wanaagsan.
Iyadoo aan la dhisin dareenkeena iyo murqaha xiisaha, awoodeena inaan midba midka kale u aragno mid gaar ah, dhan, qurux bini aadamku wuxuu bilaabayaa isku qasnaan.
Taasi waxay horseedaa guntibooyin laabtayada ah, xoogsheegasho, eex, iyo eex
Xukunka. Takoorid. Bani-aadamnimada. Khilaaf.
Rabshado iyo dagaal ka dhaca qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna.
Fikradaheena, hadaladeena, iyo ficilkeena.
Iskuday in wax looga qabto caqabadaha adduunkeena iyadoo caqli iyo fikrado cusub la dareemayo wanaag, laakiin waa muddo dheer
Waxaan cusbooneysiin karnaa inaan dib-u-qaybinno dhammaan cuntadeena iyo dhammaan lacagteenna, laakiin intee in le'eg ayuu sii socon doonaa iyo nabadda ay keeni doonto haddii aan weli ku dhegganno eex, xukun, eex, jahli, ama nacayb qoto dheer oo qalbigeenna iyo maskaxda?
Taasi waa sababta sheekooyinka adduunka ka wanaagsan ay lagama maarmaan ugu yihiin qof kasta oo naga mid ah, da'da 2 iyo ka weyn:
Inaad jeclaato barashada nolosha oo dhan self, kuwa kale, iyo adduunkeena.
Inaad barato jaceylka self, kuwa kale, iyo adduun ka wanaagsan.
Ku fahma kuweenaselves iyo midba midka kale iyada oo loo marayo dhammaan bini'aadantinimadayada adag ee quruxda badan ee la wadaago.
In la barto xalinta khilaafaadka. Inaan nabad la noqonno kuwayagaselves iyo kuwa kale.
In la hakiyo xukunka oo runtii midba midka kale arko. Inuu dadnimo yeesho. Ku raaligelin. In la wada bogsiiyo.
Aan ku abuurno adduun ka wanaagsan sheekooyinka aadanaha ee dhabta ah iyo su'aalaha nolosha ee waaweyn.
Horaantii nolosha, maalin kasta, iyo meel kasta.
Aynu kala furno guntimaha dhexdeenna iyo innaga.
Aan nahay cusbooneysiin dharka bulshadayada.
Aan dib u habeynno adduun ka wanaagsan.
Aan ka gudubno madaxa ilaa qalbiga.
Aan nabad ahaado.
Ku biir Better World Edka qaybgalka maanta.
Su'aal adduun oo ka wanaagsan dhallinta:
Haddii aan oo dhan lagu bartay muuqaallo iyo sheekooyin aan hadal lahayn si loo helo adduun wanaagsan laga bilaabo markii aan 2 sano jir nahay, mid ka mid ah caqabadaha adduunkeena xitaa jira?
Waxaan dhalinyarada u abuurnaa muuqaalo aan hadal lahayn & sheekooyin dadnimo
in la jeclaado waxbarashada nolosha oo dhan self, kuwa kale, iyo adduunkeena.
Better World Ed waa 501 (c) (3) aan faa'iido doon ahayn ("Reweave, Inc.").
Saxiix, Kafiilka Barayaasha, Iyo Nalasoo dib u soo noolaynta bini'aadantinimada.
Sababta aan u Jirno & Saamayntayada
Ku Deeqo Xubinnimo
Alaabta Adduunka Wanaagsan
Taageer Sheekooyinka Cusub
FAQs & Docs Help
Martigeliso Kooxdayada (PD & in ka badan)
© Copyright 2022 Better World Ed (Reweave, Inc.) | Aan Bani'aadamnimo Barashada
Aynu bulshada u cusbooneysiino | Aynu NOQONO
Shuruudaha isticmaalka | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
XWaxaan u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga si aan kuu siino waayo-aragnimada ugu habboon anagoo xasuusnaane waxaad door bidday iyo booqashooyinka soo noqnoqday. Adigoo gujinaya "Aqbal", waxaad ogolaanaysaa isticmaalka DHAMMAAN cookies-ka. ha sell macluumaadkayga gaarka ah. Read MoreOgolaanshahaKa baxSettings
__rag__mid sano 1 Stripe waxay dejisaa buskudkan si uu u habeeyo lacagaha.
__sabriid_sid 30 daqiiqo Stripe waxay dejisaa buskudkan si uu u habeeyo lacagaha.
JSESSIONID fadhiga Buskudka JSESSIONID waxa isticmaala New Relic si uu u kaydiyo aqoonsiga fadhiga si Relic Cusub uu ula socdo tirinta fadhiga codsiga.
fadhiga_gabdhaha 30 daqiiqo laravel waxay isticmaashaa laravel_session si ay u aqoonsato tusaale fadhiga isticmaalaha, tani waa la bedeli karaa
ts 3 sano PayPal waxay u dejisaa buskudkan si uu awood ugu yeesho macaamilo sugan oo la dhex maro PayPal.
ts_c 3 sano PayPal waxay u dejisaa buskudkan si uu lacag-bixino badbaado leh ugu sameeyo PayPal.
XSRF-TOKEN 30 daqiiqo Buskudkan waxaa dejiyay Wix waxaana loo istcimaalayaa arrimo ammaan.
kulanka_butter saacadood 2 Sharaxaad ma leh
wp_woocommerce_session_eadf5e9ac70b75cf60bdd37a0be90552 2 maalmood Sharaxaad ma leh
NID 6 bilood Kukiyada NID, oo ay dejisay Google, ayaa loo isticmaalaa ujeedooyin xayaysiis; in la xaddido inta jeer ee isticmaaluhu uu arko xayeysiis, in la aamusiyo xayeysiisyada aan loo baahnayn, iyo in la cabbiro waxtarka xayeysiiska.
_gat_gtag_UA_50467616_2 1 daqiiqadii Waxaa dejiyay Google si loo kala saaro isticmaalayaasha
vuid 2 sano Vimeo waxay u rakibtaa buskudkan si uu u ururiyo macluumaadka raadraaca isagoo dejinaya aqoonsi gaar ah oo lagu dhejiyo fiidiyowyada mareegaha.
__utmc fadhiga Buskudka waxa dejiya Google Analytics oo waa la tirtiraa marka isticmaaluhu xidho browserka. Waxaa loo istcimaalaa in lagu suurtageliyo wada shaqaynta urchin.js, kaas oo ah noocii hore ee Google Analytics oo lala isticmaalo buskudka __utmb si loo go'aamiyo kulamo/booqasho cusub.
__smt 10 daqiiqo Falanqaynta Google ayaa u dejisay buskudkan si uu u joojiyo heerka codsiga.
__utmv 2 sano Buskudka __utmv waxa lagu dejiyay aalada isticmaalaha, si ay Google Analytics awood ugu siiso in ay kala soocdo booqdaha.
__utmz 6 bilood Falanqaynta Google ayaa u dejisay buskudkan si uu u kaydiyo isha taraafikada ama ololaha uu booqdehu ku gaadhay goobta.
_gat saacadood 2 Buskudkan waxaa lagu rakibay Google Universal Analytics si loo xakameeyo heerka codsiga sidaasna loo xaddido ururinta xogta goobaha taraafigga ee sarreeya.